MP4 Reducer: Olee Iji belata Size nke MP4 (MPEG / mpg) Video
> Resource> MP4> Olee otú iji belata hà MP4 (MPEG / mpg) Video
Ị nwere ike mkpa belata size nke MP4 dị iche iche ihe, dị ka E-zite obere vidiyo na otu enyi, na-azọpụta na diski ike ohere, na-ekere òkè videos online, na-egwu ya na ekwentị mkpanaaka, ect. N'agbanyeghị ihe mere bụ, nta video faịlụ nwere ike mfe free ebe nchekwa ohere, kesaa videos n'elu internet ngwa ngwa, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji belata MP4 faịlụ, ngwá ọrụ dị ike - Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ ihe dị gị mkpa.
Best AVI Video Reducer maka Windows / Mac (El Capitan gụnyere)
Mfe belata size nke AVI video faịlụ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
Enyere gị ka ịhazie video ntọala dị ka bit ọnụego, sample ọnụego na ndị ọzọ.
One-pịa iji tọghata AVI video faịlụ ndị ọzọ formats.
Na-enye isi video edezi ọrụ dị ka mkpụbelata.
1 Tinye gị MP4 videos ka video reducer
Mgbe ị wụnye na-agba ọsọ a video reducer, pịa "Tinye Files" button na-agagharị na họrọ MP4 faịlụ nke ị chọrọ iji belata size. I nwekwara ike ịdọrọ ha kpọmkwem n'ime isi window.
2 Malite mbenata size nke MP4
Pịa format oyiyi na n'akụkụ aka nri nke isi window ẹkedori ọnọdụ window. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji aka ịgbanwe mmepụta parameters site na ịpị akụ n'akụkụ kọlụm ịhọrọ site na ndọpụta ndepụta ma ọ bụ abụọ-ịpị kọlụm na ndochi gị presets. I nwekwara ike nne Mmetụta oyi "Obere Size" nhọrọ ka usoro ihe omume resize hà MP4 ozugbo.
Mgbe ahụ, kụrụ OK na-aga azụ ka isi interface. Mgbe ahụ ị pụrụ mara na video size-aghọ nta tụnyere ndị mbụ otu.
IHE: Mgbe mbenata size nke MP4, àgwà nke video ga ibelata. Otú ị ga-tie a itule n'etiti size na àgwà.
3 ịzọpụta ọhụrụ MP4 faịlụ
Mgbe ị na-afọ ojuju na ya pụta, na-ahọrọ a kwesịrị ekwesị mmepụta format bụrụ na ị chọrọ iji tọghata MP4 faịlụ ndị ọzọ usoro. Mgbe ahụ kụrụ "tọghata" na-amalite exporting ọhụrụ faịlụ. I nwekwara ike gaa DVD isi window na ọkụ faịlụ DVD na free na mma ndebiri na nkeji.
Video Tutorial: Olee Iji belata Size nke MP4 (MPEG / mpg) Videos
Olee otú dezie MP4 na Windows na Mac
Olee otú Resize MP4 Files
Olee otú ewepụtụ MP4 (MPEG-4) Video
Olee otú Tinye Audio ka MP4 Video
Olee ka jikota Multiple MP4 Files n'ime otu
Olee otú akuku MP4 Files
Olee otú ka Wepụ Audio si MP4
Top 5 Best Free MP4 Video Editors
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files